चाडवाडलाई लक्षित गर्दै शुक्रवारदेखि मुख्य शहरमा सुपथ मूल्य पसल,के मा कति छुट ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
चाडवाडलाई लक्षित गर्दै शुक्रवारदेखि मुख्य शहरमा सुपथ मूल्य पसल,के मा कति छुट ?
काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले दशैं, तिहार र छठलगायत चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम आय भएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर यही शुक्रवारदेखि दसैंलक्षित सहुलियत पसल सुरु गर्ने भएको छ। पसल आगामी असोज १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्य शहर तथा जिल्ला सदरमुकामहरुमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन हुनेछ । यसरी खुल्ने पसल कात्तिक २७ गतेसम्म चल्नेछन् । देशभर ४७ वटा सुपथ मूल्यका पसल खुल्नेछन् ।
यी पसलमा मोटा चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, चिनीमा ५, बास्मतीमा १०, खसीबोका च्यांग्रामा १०, नुनमा २, डिडिसी घ्युमा ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाा छुट दिने निर्णय भएको छ ।
यस्ता पसलमा सरकारी संस्थानले खाद्यान्न तथा उपभोग्य समानमा विभिन्न छुटहरु दिनेछन् । दाल, चामल, चिनी, मैदा, सुजी, दाल र सोयाविन तेलमा छुट दिइने छ । दुग्ध विकास संस्थानले घीउमा छुट दिनेछ । खाद्य संस्थानले चामल, गहुँ र गेडागुडी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ ।
छ नेपालीको मृत्यु
रोल्पा। भारतमा एक हप्ता अगाडि आएको बाढीमा ६ नेपालीको मृत्यु भएको छ । भारतको सिमलामा आएको बाढीका कारण एकै […]
२२ ट्याङ्कर इन्धन भित्रियो
काँकडभिट्टा, पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट २२ ट्याङ्कर इन्धन भित्रिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय […]
अष्ट्रेलियामा बस्ने बिष्णुको प्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, हामी यता सबै परदेशीहरु शारीरिक रुपमा त स्वस्थ नै छौं तर मानसिक रुपमा भने […]
‘एमाओवादी लास हो’
काठमाडौँ, एमाओवादी भर्खरै परित्याग गरेको बताएका डा. बाबुराम भट्टराइले एमाओवादीलाई मरिसकेको लासको संज्ञा […]
सिड्नीमा पनि नेपाल पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास क्यानबेरा र नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालय न्यूसाउथवेल्सका […]